भीम रावललाई फकाउन माधव नेपाल टोखामा ! « Sagarmatha Daily News
भीम रावललाई फकाउन माधव नेपाल टोखामा !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष भीम रावल सहभागी नभएपछि उनलाई भेट्न उनकै निवास टोखा पुगेका छन् । आफूनिकट नेताहरुलाई बोलाएको बैठकमा रावल अनुपस्थित भएपछि उनलालाई भेट्न नेपाल टोखा पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत माग्दा एमालले ह्विप नै जारी गरेर मत दिनेलाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, ओली समूहकै ८ जना सांसदले ह्विप उल्लंघनत गरेर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए भने नेपाल १४ जना गरी २२ जनाले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदहरुलाई एमालेले बुधबार २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । र, पार्टीले गरेको कारबाही र अबको कदमबारे बुधबार नेपाल समूहको बैठक आह्वान गरिएको थियो ।
तर, बैठकमा नेता रावल नगएपछि उनलाई भेटघाट गर्न र फकाउन बैठक सकिएलगत्तै नेता नेपाल रावलको निवास टोखा पुगेका छन् ।